Ukuhlaziywa kwama-Iron Ukukhethwa kweNdwendwe
Izwi elithi "yonke into emdala intsha kwakhona" inokufaka isicelo kwisitya esihle sesithwathwa ngexesha elivela ku-TaylorMade. Eyaziwayo kwabanye ukuzisa amanye amanqaku kunyaka kunokuba abanye abagadi begolfu bathathe i- mulligans , i- TaylorMade iye yabuyela emuva ekudaleni iqoqo leeklabhu ngokubonakala kancinci, ngelixa lixubusha nge-teknoloji engcono kakhulu yexesha langoku.
Ekuqaleni, ndacinga ukuba iinqwelo ezikhethiweyo eziTyelelweyo zenziwe.
I-Point No. 1 ye-TaylorMade. Baye badala ukugqiba okwangoku kuseklasini kwaye kubonwe kwiiklabhu ezininzi ezixhaswe, kunye nokuhlala zizinzile kwaye zikwazi ukuhlala ixesha elide.
Isicatshulwa sesibini esingekho sikhokho somkhulu wakho kukusetyenziswa kwegama elithi "ikhonteli ephihliweyo" kumqolo osemva kwi-clubhead. Iqonkqo ephihliweyo yintsika yesiganeko sikaTaylorMade esandula kubaqhubi. Bazise ngoku kutshanje kwiimvalo zabo kunye neenkomfa ze-Burner kunye neBurner Plus. Kodwa liyabonakala ngokugqithiseleyo ngoTyelelo olukhethiweyo.
"TP" ibe ngu-TaylorMade utyunjwa kwiiklabhu ezifanelekileyo kakhulu kubadlali abakhubazekileyo. Kodwa ngelixa ndicaca ukuba i-TaylorMade Tour Preference Preference ijoliswe kubadlali abangcono, abaphakathi kwendawo yokukhubazeka banokudlala le club ngokuxolelwa kwayo. Umgca wongqongquthela umncinci kwaye umnqweno ungaphantsi kunezinye iimpawu kwi-TaylorMade. Nangona kunjalo, isithako esiyimfihlo sisisindo esithe xaxa esithende kunye nenzwane yentloko kunye nenjongo "yokutyelela" eyenza ukunciphisa i-turf.
I-undercut cavity ishintshe ubunzima kwi-perimeter yokuxolelwa.
Ukusebenza apho ibali lifumana umdla. Ndicinga ukuba i-Tour Prefredreds yinguqulelo enhle kwezinye zeT Taylor ezenziwe ngokutsha. Ukubethelwa kakuhle, ukuhlaselwa kweendawo kuvuzwa ngokuzizwa komnatha we-buttery, kufana kakhulu nesinyithi esenziwe. Ukungaphumeleli kwiphakathi akuyi kulahlekanga kwaye ukuziva kungekusohlwaya.
Iimfono zilula ukusebenzela ngakwesobunxele nangakwesokudla, kwaye zombini kunye nokukhonkqoza.
Ndiza kuthi ngelixa ndibe ndingumdlali wangempela we-Dynamic Gold shafts ezithengayo kwi-Tour Preferreds, zathi zivakale ngokungafani ngokupheleleyo kunye neendwendwe ezikhethiweyo ziTyelelo ngenxa ye-medallion yokuqhaqhaqhafaza ehlakaniphile. Abaqulunqi be-TaylorMade bafumana iingongoma ezongezelelweyo ngokubandakanya isici sokudambisa-sondeza kwimva ye-clubhead ngendlela ekholisayo kodwa ekhangelekayo. Ubona, uzive kwaye usebenza: zonke izithako zokuphumelela.
Konke kuzo zonke, khangela iinqwelo ezikhethiweyo zoTyelelo ezivela ku-TaylorMade. Kungenzeka ukuba bathathe umdlalo wakho kwindawo entsha.
Umgca we-topline, uhla lwe-offset
Uvakalelo oluqinile kunye nesandi
Ukhetho lwe-stock shaft limited
Izintandokazi zeBrazil ze-Skating Skating Pants
Iziqithi Zesiteshi Fred Rubble - Ukuhlaziywa kwe-Surfboard
Imidwebo engabonakaliyo yabantu onokukwazi ukuyisebenzisa ngokulula
Kutheni kwaye Utshintsha njani i-Brake Fluid
Izimangaliso zikaYesu: Ukuphilisa iNtetho yomkhonzi
I-New Fifth Ocean
IiVerbs eziphezulu kunye neeNtshonalanga
Imiyalelo yoxolo lwengqondo
I-Loyola Marymount iYunivesithi yokuVunywa